Yesu Saa Akwatafo Du Yareɛ (Luka 17) | Yesu Asetena
KENKAN WƆ Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Norwegian Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
YESU SAA AKWATAFO DU YAREƐ
Bere a Sanhedrin no yɛɛ sɛ wɔbɛkum Yesu a anyɛ yie no, ɔfirii hɔ kɔɔ Efraim. Ná Efraim wɔ Yerusalem atifi. Ɔne n’asuafo no tenaa hɔ; ɛhɔ deɛ na n’atamfo no nni hɔ. (Yohane 11:54) Nanso na Yesu bere a aka sua, efisɛ na afe 33 Twam afahyɛ no rebɛn, enti ankyɛ na ɔfirii hɔ kɔtoaa n’adwuma so. Ɔde n’ani kyerɛɛ atifi fam kɔfaa Samaria kɔɔ Galilea. Ɔrekɔ hɔ yi, na ɔrenkɔ hɔ bio na wawu.
Bere a Yesu hyɛɛ n’akwantu ase a ɔfiri kuro baako so rekɔ kuro foforo so no, ɔhyiaa akwatafo du bi. Kwata wɔ hɔ yi, sɛ ɛyɛ obi a, ɛtumi wewe nipadua no fa bi te sɛ nsa, ɛnan, ne aso. (Numeri 12:10-12) Tete no, na Onyankopɔn Mmara kyerɛ sɛ kwata yɛ obi a, ɛnsɛ sɛ ɔba nnipa mu na sɛ obi rebɛn no nso a, ɛsɛ sɛ ɔteɛteɛm sɛ, “Me ho nte, me ho nte!”—Leviticus 13:45, 46.
Wei nti, akwatafo no ammɛn Yesu, na mmom wɔteɛɛm kaa sɛ: “Yesu, Ɔkyerɛkyerɛfoɔ, hu yɛn mmɔbɔ!” Yesu huu akwatafo no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ na momfa mo ho nkɔkyerɛ asɔfoɔ no.” (Luka 17:13, 14) Nea Yesu yɛe yi kyerɛ sɛ ɔdi Onyankopɔn Mmara so paa, efisɛ asɔfo nko ara na na Mmara no ma kwan sɛ wɔhwɛ sɛ wɔn a wɔyare kwata no ho ate, na afei deɛ wɔbɛtumi aba nnipa mu.—Leviticus 13:9-17.
Ná akwatafo du no wɔ gyidi paa sɛ Yesu bɛtumi asa wɔn yareɛ. Enti bere a wɔnnyaa ayaresa mpo no, wɔsii so kɔɔ asɔfo no hɔ sɛnea Yesu kae no. Ampa-ne-ampa ara, wɔnam kwan so rekɔ no, wɔhuu sɛ kwata no atu ayera! Gyidi a wɔnyaa wɔ Yesu mu no anyɛ kwa.
Akwatafo no baako san n’akyi baa Yesu nkyɛn, nanso nkron a aka no kɔɔ wɔn baabi. Nea ɔsan baa Yesu nkyɛn no, na ɔyɛ Samariani. Adɛn nti na ɔsan bae? N’ani sɔɔ nea Yesu yɛ maa no no. Enti ɔde “nne kɛseɛ hyɛɛ Onyankopɔn animuonyam,” efisɛ ɔhuu sɛ Onyankopɔn na ama wanya ayaresa. (Luka 17:15) Ɔbɛduu Yesu nkyɛn no, ɔhwee ne nan ase daa no ase.
Yesu bisaa nnipa a wɔwɔ hɔ no sɛ: “Ɛnyɛ du na wɔn ho firiiɛ? Na nkron a aka no wɔ he? Enti wɔanhunu wɔn mu biara a wasan n’akyi de animuonyam rebrɛ Onyankopɔn sɛ ɔbarima a ɔfiri ɔman foforɔ mu yi?” Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ Samariani no sɛ: “Sɔre na kɔ; wo gyidie ama wo ho asan wo.”—Luka 17:17-19.
Akwatafo du a Yesu saa wɔn yareɛ no, na ɛkyerɛ sɛ Yehowa Nyankopɔn taa Yesu akyi. Nea ɔsan bae no deɛ, yɛbɛtumi aka sɛ ɛnyɛ ayaresa nko ara na ɔnyae, na mmom na wasi nkwa kwan no so. Ɛnnɛ deɛ, Onyankopɔn mfa Yesu so nyɛ anwonwade nsa nkurɔfo yareɛ. Nanso sɛ yɛnya Yesu mu gyidi a, ɛbɛma yɛasi nkwa kwan no so, kyerɛ sɛ, yɛbɛnya daa nkwa. Yɛn nso, nea Onyankopɔn reyɛ ama yɛn no, yɛn ani sɔ te sɛ Samariani no anaa?
Bere a Sanhedrin no yɛɛ sɛ wɔbɛkum Yesu a wɔannya no no, ɛhe na Yesu kɔe?
Adɛn nti na akwatafo du no amma nnipa mu? Dɛn nti na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔhu asɔfo no?
Dɛn na yɛbɛtumi asua afiri Samariani a ɔbɛdaa ase no asɛm no mu?